‘अज्ञात रोग’बाट मर्नेको संख्या ११ पुग्यो
महोत्तरीको भङ्गाहा र बर्दिवास नगरपालिका जोडिएका बस्तीमा अज्ञात रोगले मर्ने मृतकको संख्या ११ पुगेको छ ।
शनिवार बर्दिवास–१२ स्थित इटाभट्ठामा काम गर्ने ५५ वर्षीय भारतीय मोतिलाल प्रजापति र भङ्गाहा–६ जमुनियाँका ४८ वर्षीय पलट साहको मृत्यु भएपछि मृतकको संख्या ११ पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
बर्दिवास–१२ मेघरोल र भङ्गाहा–७ मेघनाथ गोरहन्नामा गत मंगलवारयता शुक्रवारसम्म ८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
मृत्यु हुनेमा बर्दिवास–१२ का ४, भङ्गाहा–७ का ६ र भङ्गाहा–६ का १ जना रहेका सो कार्यालयले जनाएको छ । ती तीनै वडाका बस्ती एकअर्कासँग जोडिएका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट शनिवार डा. अमृत पोखरेल र विश्व स्वास्थ्य संगठनका डा. सुदिपा खड्का र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीको टोली यी बस्तीमा पुगेको छ । टोलीले बिरामीको लक्षणबारे पाएको जानकारी र अन्य पक्षबाट समेत अनुसन्धान गरिरहेको डा. पोखरेलले बताए ।
यसैबीच जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मृतकमध्ये २ जनाको कोभिड–१९ सङ्क्रमण हो/होइन यकिन गर्न स्वाब संकलन गरी पीसीआर परीक्षणका लागि प्रयोगशाला पठाइएको जनाएको छ । ‘मृतकको आरडीटी जाँच परिणाम नेगेटिभ आएको छ,’ प्रहरी उपरीक्षक अधिकारीले भने, ‘अब पीसीआर जाँचको र परीक्षण रिपोर्ट आएपछि यकिन हुनेछ ।’
थारु, मुसहर, चमार, बाँतर (सर्दार) सहितका जनजाति र दलित समुदायको सघन बसोबास रहेका ती बस्तीमा रहेको छ । मेघनाथ गोरहन्नामा एक साता पहिलेमात्र सीतापुर, औरही र जमुनियाँ प्रहरी चौकीको संयुक्त गस्तीले १६ हजार लिटरभन्दा बढी मदिरा बनाउने कच्चा पदार्थ र ४ वटा भट्टी नष्ट गरेको थियो ।